ပြည်မအထုပ်မြှောင်မြှား | Rieter Professional Credit Bureau
Rieter Continental Package ဒုတိယနို့ဝန်ဆောင်မှုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ယခုအခါပြည်မစျေးကွက်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာနှင့်ထွန်းသစ်စစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီများစွာသည်ပြင်ပဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ပထမရွေးချယ်မှုမှာတရုတ်ပြည်မကြီးဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရေလက်ကြားများအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများမကြာခဏဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ယခုအဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပြင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ ပြည်မကြီးတွင်အမုန်းတရားများပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်။ သူသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗလာကျင်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အချိန်အတော်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့သူခင်ပွန်းတစ် ဦး သည်သူ၏ဇနီးနှင့်ကလေးများအားဒုတိယဇနီးအတွက်ထားခဲ့ပြီးပင်ထိုင်ဝမ်သို့မပြန်ပါ။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် "အိမ်ထောင်ရေးဥပဒေ" ကိုပြင်ဆင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်က“ bao mistress” ၏လုပ်ရပ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဥပဒေကိုပြင်ဆင်မှုသည်ထိုင်ဝမ်စီးပွားရေးသမားများအပေါ်မပစ်ပယ်သော်လည်းဥပဒေပြုရေးနှင့်အရေးယူမှုများမှတစ်ဆင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားသည်။ ပြည်မကြီးတွင်ထိုင်ဝမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဇနီးသည်အပြင်အဂတိလိုက်စားမှု၊ ၎င်းသည်ထိုင်ဝမ်စီးပွားရေးသမားများအပေါ်အချို့သောသတိပေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်မကြီးရှိသက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၏အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ထိုင်ဝမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်သည်။
တရုတ်ပြည်မကြီးသည်ရာဇ ၀ တ်မှုဥပဒေပုဒ်မ ၂၅၈ တွင်“ လူမဆန်တဲ့ရာဇ ၀ တ်မှု” နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဌာန်းချက်များရှိသည်။ မည်သူမဆိုအိမ်ထောင်ဖက်ရှိသူနှင့်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသူသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ၌အိမ်ထောင်ဖက်ရှိပြီးသူနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသူကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားသူသည်ကြီးလေးသောအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထို့ထက်နည်းသောထောင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်။ ထောင်ဒဏ်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရေးကာလ။ အထူးသဖြင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဥပဒေပုဒ်မ ၄၅ အရကြီးလေးသောဥပဒေကိုဥပဒေအရပြစ်မှုဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမည်ဟုမှတ်သားရန်အထူးအရေးကြီးသည်။ "ကျူးလွန်ခံရသူများသည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပါပြaccordance္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီပြည်သူ့တရားရုံးတွင်ပုဂ္ဂလိကတရားစွဲဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အများပြည်သူလုံခြုံရေးအေဂျင်စီများသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည်ဥပဒေအရပြည်သူ့တရားစွဲဆိုမှုကိုတင်သွင်းရမည်။ ”“ အိမ်ထောင်ရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ” အပိုဒ် ၂၀ အရ၊ အိမ်ထောင်ဖက်တစ် ဦး ထပ်မံထိမ်းမြားပြီးသူ၏ဇနီးသည်ကတိုင်ကြားခြင်းမပြုလုပ်ပါက၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သည်ယင်းကိုရှေ့နေချုပ်ထံတင်ပြရမည်။
လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုတွင်ဒုတိယဇနီး၏ပါ ၀ င်မှု၊ ခင်ပွန်း၏မယားငယ်၊ ဒုတိယဇနီး၏ကလေးနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါလူမည်မျှဝမ်းနည်းကြေကွဲပါသနည်း။ ဤမျှကြောင့်မိသားစုမည်မျှပြိုလဲခဲ့သည်! ဤအချိန်တွင်ပြexperiencedနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွေ့အကြုံရှိသောသူများ၏အကူအညီကိုရယူခြင်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် Rieter Credit Co. , Ltd. သည်ဒုတိယဇနီး၏သခင်မအားပျော်ရွှင်မှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အကြွေးတောင်းခံမှုရှိပါကဆွေးနွေးရန်နှင့်တိုင်ပင်ရန်လာပါ၊ သက်သေအထောက်အထားများရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီရန် Rieter ၏ Mainland Baoer နို့ဝန်ဆောင်မှုကိုခွင့်ပြုပါ။ သို့မှသာသင်စိတ်ချလက်ချအနားယူနိုင်ပြီးပြnoနာမရှိပါ။
Rieter ခရက်ဒစ်သတင်းအချက်အလက်အေဂျင်စီသည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအတွေ့အကြုံကိုခင်ပွန်းသည်နှင့်ဇနီးနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ညှိနှိုင်းရန်၊ ခင်ပွန်းသည်နှင့်ဇနီးတို့အကြားဆက်သွယ်မှုပေါင်းစုံကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများတွင်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများကိုဖြေရှင်းရန်လင်နှင့်မယားကိုကူညီနိုင်စေရန်အိမ်ထောင်ရေးအကျပ်အတည်းကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
Continental package အငွေ့အသက် - ကွာရှင်းခြင်းဒီဇိုင်းစရိတ် - ဖောက်သည်များကံမကောင်းသောလက်ထပ်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ကူညီရန်အရေးယူရန်ပညာရှင်အတွေ့အကြုံဆန်းစစ်ခြင်းကိုအသုံးပြုပါ
အခြားပါတီနှင့်မခံစားရပါ။ သို့သော်ကွာရှင်း။ မရပါ၊ သင်၏နာကျင်မှုကိုဖြစ်စေပါသည်။
တရုတ်ပြည်မကြီး၏ဒုတိယနို့စစ်တမ်း အမှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည် 14 အလုပ်လုပ်ရက်များ ထံမှ TWD $ 200,000
အဓိက ၀ န်ထမ်းများကုန်ကျစရိတ်အပြင်တရုတ်ပြည်မကြီး၏ဒုတိယနို့မှုခင်းများတွင်မြင်းတပ်ထားသောမြင်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ရေနံပိုက်ဆံ၊ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ခ၊ အဝေးပြေးလမ်းမခ၊
လူအစုအဝေးအဘို့အ Continental အထုပ်နို့
ခင်ပွန်း / ခင်ပွန်းသည်ပြည်မကြီးပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်သည်၊ သို့မဟုတ်ပြည်မကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်သည်
သူမ၏ခင်ပွန်းကပြည်မတွင်အလုပ်လုပ်နေသည်မှာသံသယရှိသူသုံး ဦး ရှိသည်ဟုသံသယရှိသည်
ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည်ဒုတိယဇနီးဖြစ်သည်ဟုသံသယရှိသော်လည်းကုန်းတွင်းပိုင်းသို့သွားသော်လည်းမသိသောဘ ၀ ကြောင့်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
ဒုတိယဇနီးနှင့် ပါတ်သက်၍ မည်သို့သောစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသနည်း။
Bao ၏သခင်မ၏အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု၌ပါ ၀ င်မှုအားထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်မကျစေနိုင်သောအပြစ်ပေးနိုင်သည်
Bao Erniu ၏အပြုအမူသည်မုန်းတီးခြင်းနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရနိုင်သည်
ငွေနှင့်တည်ဆောက်တစ် ဦး ကဆက်ဆံရေး? ဒါအမှန်လား
တစ် ဦး မြှောင်ကိုဖုံးအုပ်၏ယောက်ျားရဲ့စိတ်ဓာတ်?
Bao Mi အကြောင်းလူတွေကဘယ်လိုထင်ကြလဲ